यी चर्चित बलिउड नायिकाको बयान : एक पटक गरेको ५ करोड लिन्छु ! – हाम्रो ईकोनोमी
यी चर्चित बलिउड नायिकाको बयान : एक पटक गरेको ५ करोड लिन्छु !
बलिउडमा करीना कपुर एकदमै चर्चामा रहेको नाम हो । उनले थुप्रै चलचित्रहरुमा काम गरेकी छिन् । उनले अभिनय गरेका धेरै चलचित्रहरु हिट पनि भएका छन् । अहिले विवाह पश्चात उनी चलचित्र क्षेत्रबाट अलिक टाढा गएको जस्तो देखिए पनि उनी फेरि दर्शकमाझ आउँने जनाइएको छ ।
अहिले हामी यहाँ चलचित्र भन्दा पनि एक टेलिभिजन कार्यक्रमका बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं । भारतमा एकदम चर्चामा रहेको शो डान्स इन्डिया डान्समा सहभागि हुनको लागि कपुरले ३ करोड भारु मागेको खुल्न आएको छ । उनले पर शो नेपाली झण्डै पाँच करोड मागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले दावा गरेका छन् ।
तका अनुसार अहिले कुरा चलिरहेको छ तर उनी जाने नजाने भन्ने एकिन भइसकेको छैन । उनले च्यानलसँग अहिले वार्ता गरिरहेको जनाइएको छ । अहिले उनको यो मुल्यले भारतमा मात्रै नभई विश्वभर चर्चा सुरु भएको छ । यो भन्दा पहिले यस शो मा आएका कलाकारहरुको भन्दा उनको यो रकम धेरै हो । एजेन्सी
भर्खरै बाहिरियो मलाईकाको भित्रि सबै देखिने सेक्सी १७ तस्विर
बलिउडमा मलाईका अरोडा एक चर्चित अभिनेत्रीको नाम हो । सुपरस्टार सलमान खानका भाईसँगको विहे पछिको सम्बन्ध विच्छेदले उनलाई थप चर्चामा ल्याउन् सफल भएको हो ।अहिले उनी अभिनेता अर्जुन कपुरसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दा चर्चामा रहेकी छिन् । अहिले बजारमा हल्ला छ कि उनीहरु छिट्टै विवाह पनि गर्ने तयारीमा लागेका छन् । उमेरको हिसाबले हेर्दा अर्जुन भन्दा मलाईका जेठी हुन् ।
तर पछिल्लो समय उनले लगतार व्यायम गर्ने भएका हुँनाले उनलाई जवान नैं देख्नेहरु पनि धेरै रहेका छन् ।यसैबीच मलाईकाले सामाजिक सञ्जालमा मालदिभ्सको विचमा रमाईरहेको केही तस्विरहरु सेयर गरेकी छिन् । फाटो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उनको निकै मजाक उडाईरहेका छन् ।
एक युर्जर्सले मलाईकालाई विवाह कहिले भनेर प्रश्न गरेका छन् ।त्यस्तै पहेँलो कलरको कपडा लगाएको एक तस्विर जुन उडाईरहेको देख्न सकिन्छ । त्यसमा एक युजर्सले लेखेका छन्, ‘अचम्म छ हावाले कपडा उडाईरहेको छ र पनि मतलव छैन १’ अर्का युजर्सले उनलाई भनेका छन् बुढी आइमाई ।